Print Peppermint - Tsika Bhizinesi Makadhi & Dhinda Zvigadzirwa
Kuprinda Matemu Glossary
Nezve Iyo Kambani
Ronga kufona kwemaminetsi makumi maviri naAustin, Creative Director wedu, kuti tikurukure chirongwa chako.
Bhuka Appointment >
Raira Sampula Pack
Yakazadzwa neanopfuura makumi maviri neshanu anoshamisa masampula emapurojekiti achangopedzwa.
Odha Sample Pack >
Yakakwidzwa Spot Gloss
Bhizinesi Kadhi Rokugadzirwa Kwebasa
Gadzirisa yakazara bhizinesi kadhi ine akawanda Special Finishes sezvaunokwanisa!
Yakazadzwa neanopfuura makumi maviri neshanu anoshamisa masampuli emapepa akasiyana uye akakosha ekupedzisa.
Vaka iyo postcard yezviroto zvako nekugadzirisa yega yega hunhu.
Gadzirisa Yako Zvino >
Yakasimudzwa Foil Postcards
Bata kutariswa kwakavimbiswa neiyi simbi yakasimudzwa foil mugoridhe, sirivheri, kana holo!
Shop Yakasimudzwa Foil Postcards >
Rega makadhi ako ebhizinesi aratidze munhu wese wauri pano kuti uite bhizinesi rakakura. Kusingaperi kwakasarudzika kwakakosha kupedzisa, saizi, uye premium mapepa emasheya.
Tenga Custom Business Cards
Zvinamirwa & Mazita
Namatidza brand yako kwese kwese! Zvinamirwa uye mavara inzira inonakidza asi inodhura inoshanda yekubva kune isina branded kuenda kune branded nekukasira.
Tenga Zvinamirwa Nemapepa
Hupenyu hunoitirwa kupembererwa! Raira kukoka kwetsika, zviziviso uye nezvimwe kuti urangarire nguva dzako dzakakosha.
Shop Koka & Zvinyorwa
Seta toni yerudzi rwako ne deboss letterpress kudhinda mutsika Pantone mavara, akadhindwa pabepa redonje rakapfava asi rakakura kwazvo.
Zivisa nhau dzako dzakakosha kune vatengi vako kana shamwari mune akasiyana emhando yepamusoro mapepa, saizi, uye yakakosha kupera.
Tenga Custom Postcards
Metal Bhizinesi Kadhi
Ita chirevo chakashinga nekupa wako mutsva angangove mutengi kadhi rebhizinesi resimbi rakaomesesa, relaser-etched pure Stainless simbi.
Tenga Metal Business Cards
Zviratidzo & Zviposta
Zvipfeko & Mabhegi
Mazano matsva kubva kuiyo Dhizaini Blog
Maitiro Ekugadzira (uye Chengetedza) Inzwi reChiratidzo chako
Kugadzira toni yemhando yezwi kwakakosha kune chero bhizinesi rekushambadzira zano. Kuchengeta izwi rinoenderana remhando kunobatsira kutaura zvakawanda nezvebhizinesi rako kune vateereri vako. Pamusoro pezvo, zvinoita kuti vawirirane nyore nebhizinesi rako, zvichiita kuti rive chinhu chinobatsira pakuvaka bhizinesi rakabudirira. Heino nhanho-ne-nhanho gwara rekuti ungaita sei… Read more
Pamusoro 5 Zvishandiso zvepamhepo zvekushandura mafoto kuita mameseji Mafaira
Online OCR maturusi anoshamisa kuwedzera kune chero munyori arsenal nhasi. Saka, sei uye ndedzipi dzavanofanira kushandisa muna 2022? Kushandura mafoto kuita zvinyorwa zvinogadziriswa chinhu chinoshamisa chekuwedzera kune chero bhizinesi kana stash yemunyori. Maturusi aya anogona kuita kuti hupenyu huve nyore nekushandura mifananidzo kuita zvinyorwa zvinogadziriswa zvekushandisa mune ramangwana nezvimwe. Maererano… Read more
10 Mazano Ekuita Nyanzvi-Inotarisa Vhidhiyo Kune Vanotanga
Mufananidzo: storyset kuburikidza neFreepik Maererano neongororo, zvemukati zvevhidhiyo zvinogadzira 82% yeinternet traffic gore rino. Izvi zvinoreva kuti vazhinji vanofarira kuona mavhidhiyo pavanenge vachitsvaga painternet uye nekuwana ruzivo rutsva. Asi nei vachida mavhidhiyo zvakanyanya kudaro? Mavhidhiyo anowanikwa zvakanyanya nekuti vashandisi vanogona kugovera zviri nyore pamunwe wavo. … Read more
Tsvaga isu pasocial
Ndapota nyora nhamba kubva 10 to 10.
Chii chinonzi 6 + 4 ?
Tora Zvidimbu & Zvakavanzika Zvinopihwa!
Joiner redu retsamba uye tora madhora gumi kubva pane yako yekutanga odhi.
Sangano redu reCokie
Iyi webhusaiti inoshandisa makiki kuti uvandudze ruzivo rwako. Tichafunga kuti wakanaka neichi, asi unogona kusarudza kana uchida.BvumaRamba Read More
Sevha Chingoro Chako
Pinda zita rengoro
Govera Chingoro Chako
Pinda kutanga kuchengetedza ngoro